လှေခုတ်ရွာကလေး: ဟာသ video လေးတွေပါ
ချင်းတွင်းဧရာမြစ်နှစ်ဖြာရစ်ခါ ပတ်ဝိုင်းအလယ်ပိုင်းရှု့ တိုင်းသာယာ လှေခုတ်ရွာ
ဟာသ video လေးတွေပါ
Posted by ဟိန်းမင်းထက် at 22:20
ဟာသ video လေးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ
Labels: ဟာသ videos
လွမ်းတယ်မေမေ..... လျှပ်စစ်မီးတွေထိန်ထိန်လင်းနေပေမဲ့ အမှောင်ကြနေတဲ့မေမေအိမ်လေးလောက် မတောက်ပဘူးမေမေ.။..။အသားငါးတွေနေ့တိုင်းစားနေရပေမဲ့ အမေချက်တဲ့ ချည်ရည်တစ်ခွက်လောက်တော့မမက်မောဘူးမေမေ။...။အခန်းကောင်းကောင်းရဲ့မွေ့ယာပေါ်မှာအိပ်နေရပေမဲ့ အမေအိမ်ကကြမ်းပြင်သင်ပျုးခင်းမှာအိပ်ရသလောက်ဇိမ်မျဘူးမေမေ။...။မလေးရှားကကောင်မလေးတွေသီချင်းဆိုသံကြားနေရပေမဲ့ မေမေရဲ့အော်ငေါက်သံလောက်မသာယာဘူးမေ။...။အချိုရည်မျိုးစုံနေ့တိုင်းသောက်နေရပေမဲ့ မေမေတိုက်တဲ့ဆေးခါးကြီးတစ်ခွက်လောက်မချိုမြိန်ဘူးမေမေ။...။အတိတ်ကံအကြောင်း ကြောင်းကြောင့်တိုင်းတပါး မှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အကျိုးနစ်ရှည်လများမတည်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲ လွမ်းတယ်............မေမေ
မင်းထက်ရေ ငါပြန်လာတော့မယ်ဟေ့ ........ကုဋေကျော်
သာလှပသောလှေခုတ်ရွာကလေးမှကြိုဆိုနေပါတယ်..မောပန်းနေပါသလား.ခတ္တခဏအနားယူပါအုံး.အေးမြကြည်လင်သော သီတာရေလေးသောက်သုံးပါအုံးး.ပြီးမှ မိမိလိုရာခရီပန်းတိုင်ကိုလျှောက်လှမ်းကြပါ.ဟုတ်ကဲ့ ဘေးမထိရန်မနဲ့လိုရာပန်းတိုင်ကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ.ရေစကြိုလှေခုတ်အိမ်ကလေးမှဆုတောင်း မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်..
အရာတော်မြေ ဘလော့ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာ
ချင်းတွင်းဧရာမြစ်နှစ်ဖြာရစ်ခါ ပတ်ဝိုင်းအလယ်ပိုင်းရှု့ တိုင်းသာယာ လှေခုတ်ရွာ မှ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ...
ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး အကြောင်း
ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး အကြောင်းကို ဖတ်ချင်လျှင် ဒီနေရာမှ ယူပါ
software ကဗျာ ခံစားချက်ကဗျာ တရား ဝတ္တုစကားပြေ သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာ သီချင်း သူငယ်ချင်းများခံစားနားစင်နိုင်ကြပါစေ
ဟာသ videos (1)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျော်ချင်လွန်းလို့ ရေခဲလို ပျော်ခဲ့တာ......... အရည်သာကျန်ခဲ့ရတယ်...... ရေကိုမြင်လို့သောက်ခွင့်မရ.... မီးကိုမြင်လို့ လှုံခွင့်မရ....... ချစ်ကံခေလွန်း တာက...... ချစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးတာတောင်. ချစ်ဖူးတွေ မဖူး.......... ချစ်သီးတွေ မသီးဘဲ...... လွမ်းဖူးတွေ တငုံငုံ....... လွမ်းသီတွေ တညွှတ်ညွှတ်နဲ့. ပင်လုံးကျွတ်...ဝေနေလိုက်တာ.. ချစ်ကံတွေ မွဲရော်......... လှေခုတ်blog
Copyright 2009 - လှေခုတ်ရွာကလေး